Bhazi Mhepo Inodzora Vagadziri & Vatengesi - China Bhazi Mhepo Inodzora fekitori
SZR dzakateedzana rudzi rwekupatsanura denga repamusoro peyunifomu yemhepo inodzora ye8.5m kusvika 12.9m kubva pakati-kusvika-kumusoro-kumagumo kwakajairwa bhazi, murairidzi, bhazi rechikoro kana bhazi rakataurwa. Iko kutonhora kugona kweakateedzana bhazi air conditioner anotangira kubva 20kW kusvika 40kW, (62840 kusvika 136480 Btu / h kana 17200 kusvika 34400 Kcal / h). Kana iri yekugadzirisa mweya yemakombi kana bhazi isingasviki 8.5m, ndapota tarisa kuSZG dzakateedzana.
SZG akatevedzana rudzi denga akatasva mhepo conditioner. Inoshanda kune 6-8.4m bhazi reguta uye 5-8.9m bhazi revashanyi. Kuti uve nehupamhi hwakawanda hwekushandisa kwema modhi ebhazi, pane marudzi maviri ehupamhi hweiyo SZG nhevedzano, muna 1826mm uye 1640 zvichiteerana.
Tichipindura kudana kwenyika kubva muna 2014 kusvika parizvino, China yaitawo zvimwe zvitsva pachigadziko chemhepo chakasimudza kumashure panguva yekutanga, yakashandisa tekinoroji yemagetsi yemhepo inonzwisisa zvakanyanya kune yedu yekumusoro-yakadzora mweya, uye yakagadzira akasiyana akasiyana masisitimu Zvigadzirwa kusangana nezvinodiwa mumusika.